Brå:Boolisku Waa ku Liitaan Baarista Faldenyeedyada Sharaf Dhoorkaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Brå:Boolisku Waa ku Liitaan Baarista Faldenyeedyada Sharaf Dhoorkaa
La daabacay onsdag 4 april 2012 kl 10.04
Booliisku waa in ay ku wanaagsanaadaan sidii ay u baari lahaayeen fal denbiyeedyada salka ku leh sharaf dhowrista ama sida afka Isweedhiska lagu yiraahdo "hedersrelaterad brott". Waxaa sidaas warbixintooda ku qoray gudiga ka hortaga faldanbiyeedyada "brottsförebyggande rådet" taas oo maantay la soo bandhigay.
Brå ayaa fiirin gaar ah ku samaysay 117 baaritaan boolis oo la xiriira faldanbiyeedka sharaf dhoorka ku dhisay ee dhacay 2009, waxayna sidoo kale warasiyo la yeesheen boolisyo, xeerilaaliyaal iyo dadyow u halgama sidii ay u taageri lahaayeen dhibanayaahsa falalkaas loo geysto. Fiirintaan gaarka ah waxay muujisay in 16 ka mid ah dhamaan falkaas ay horseedeen in la baaro ama maxkamad lakeeno oo uu xukun dhaco.
Booliska waa ku liitaa in ay faham guud u yeehsaan xalaada haweenka sidoo kalena lama waraysto dhamaan dadka ay tahay in la warasto, ayey yiraahdeen bariyaasha warbixintaan soo bandhigay.
Si loogu guulaysto in la baaro falabadan oo ka mid falalkaan salka ku leh sharaf dhoorka waxaa loo baahanyahay in baaritaanka loo sameeyo si taxader leh, booliskuna hirgeliyaan koox guud oo u xilsaaran sidii dhamaan laamaha booliska looga haqab tiri lahaa aqoonta iyo waayo aragnimada loo leeyahay faldaniyeedyada ku dhisay sharaf dhoorka.